dr.yuwaraj khatiwada(dr.yuwaraj khatiwada) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
अमेरिका गएका अर्थमन्त्रीसँग विदेशीले नेपालको पूँजीबजारको विषयमा चासो देखाए, दायरा फराकिलो बनाउन सुझाव
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्गटन डि.सी.मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक समूहको बोर्डस अफ गभर्नरहरूको वार्षिक बैठकमा सहभागी भई आज स्वदेश फर्किएका छन् । बैठकमा विश्व व्यापार तथा लगानीमा देखिएको घट्दो क्रम, खास गरी व्यापारमा संरक्षणवाद तथा भू–राजनीतिक तनावहरू, ब्रेक्जिट,...
विश्व आर्थिक मञ्चमा अर्थमन्त्रीको सम्बोधन, नेपालमा लगानी गर्न आह्वान
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भारतको नयाँदिल्लीमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रममा दक्षिण एशियाली मुलुकको आर्थिक परिदृश्य विषयमा सम्बोधन गरेका छन् । सो क्रममा डा. खतिवडाले दक्षिण एशियाली मुलुकको विकासका लागि देशहरुबीच एक आपसमा गहिरो आवद्धता, यातायात, उर्जा, सञ्चार लगायतमा बढी कनेक्टिभिटी र वित्तीय एकिकरण...
नेपालको बैंक ब्याजदर चर्को होइन–अर्थमन्त्री
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजदर चर्को नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले लगानीयोग्य रकमको माग उच्च रहेको अवस्थामा बैंकहरुको ब्याजदर चर्को भयो भन्ने विषय सही नभएको तर्क गरेका हुन् । बुटवलको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै...
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले चाँडै सार्वजनिक खरीद ऐन संसोधन गरी सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरुमा अनिवार्य रुपमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोगको बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् । नेपाल धागो उत्पादक संघद्वारा आयोजित ‘नेपाल यार्न एण्ड टेक्सटाइल एक्स्पो–२०१९’ को भृकुटीमण्डपमा बिहीबार उद्घाटन...
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजारलाई उत्तेजित बनाउने र गिराउने प्रवृति व्याप्त भएको उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्थामा सेयर बजार घट्नुपर्ने कुनै कारण आफूले नदेखेको दाबी गरेका छन् । धितोपत्र बोर्डको २७ औं वार्षिकोत्सवमा उद्घाटन मन्तव्य राख्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मुलुकका आर्थिक परिसूचकहरु उत्साहजनक रहेका,...
‘दुई वर्षभित्रमा नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट स्तरोन्नतिको संभावना’
काठमाण्डौ । एशियाली विकास बैंकको बाउन्नौ बोर्डस अफ गभर्नरको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुने शिलशिलामा अर्थ मन्त्री डा.युवराज खतिवडा र बैंकका अध्यक्ष ताकेहिको नकाओको बीचमा शुक्रबार फिजीको नादीमा द्विपक्षीय बैठक भएको छ । सो बैठकमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालको वर्तमान समग्र आर्थिक स्थायीत्वको अवस्था चित्रण गर्दै मुलुकले यस बर्ष पनि...
‘किसानलाई एक्ला–एक्लै अनुदान दिंदा दुरुपयोग भयो, अब सहकारीबाट जानैपर्छ’
-डा. युवराज खतिवडा कृषिमा यति धेरै जोखिम छ । यतिधेरै जोखिम भएकै कारण कृषिलाई राज्यले संरक्षण गर्नु परेको हो । भूमिको जोखिम छ, एक त भौतिक रुपमा हेर्दा पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम छ, माटो भू–क्षय हुने, कृषि सामग्री, रासायनीक मल, भूमिको गुणस्तरमा क्षयीकरण हुँदै जाने, पानीको मुहान सुक्ने, भएका पनि व्यवस्थित नहुँने, जलवायु परिवर्तनले मौसमी...
बेलायतका लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्रीको आश्वासन–‘नेपालमा लगानी गरे लाभै लाभ’
काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दुई दर्जनभन्दा बढी बेलायती कम्पनीका व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरुसंग छलफल गरेका छन्। ब्रिटिश एक्सपर्टिज इन्टरनेशनल (बिईआई) ले आयोजना गरेकोे ‘नेपालमा लगानीको अवसर’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले नेपालमा लगानीको अवसर, वातावरण र सम्भावनाका बारेमा त्यहाँका लगानीकर्तालाई प्रष्ट...
अर्थमन्त्री एक्सनमा: बजारको समस्या अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन
काठमाण्डौ । पूँजीबजार र मुद्रा बजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा तातेका छन् । उनले बिहीबार सरोकारवालाहरुको आकस्मिक बैठक डाँकेर दुवै बजारमा पछिल्लो समय देखिएका खराब प्रवृतिहरुको बिषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधानको सुझाव दिने गरी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका हुन् । समितिको संयोजकमा नेपाल...
व्यापार युद्धको बिषयमा अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालीे धारणा, साना मुलुकको आर्थिक व्यवस्था चुनौतिपूर्ण
काठमाण्डौ । विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बार्षिक बैठक अन्तर्गत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र मतदान समूहको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता तथा अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विश्वमा हाल देखा परेको व्यापार युद्धको अवस्थाले नेपालजस्ता साना मुलुकहरुका लागि समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन गर्न चुनौति सिर्जना...